जनताले जिम्मेवारी सुम्पे, म पूरा गर्छु : प्रभा बराल – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
जनताले जिम्मेवारी सुम्पे, म पूरा गर्छु : प्रभा बराल
१२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १०:००
स्थानिय तहको निर्वाचनमा राप्ती नगरपालिका बाट अत्याधिक बहुमतका साथ बिजयी भएपछी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशीलता सँगै इमादारिताका साथ उभिएकी,कर्मठ शालीन महिला नेत्री प्रभा बराललाई शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, नेता–कार्यकर्ता तथा नगरवासीहरुले बधाई र शुभकामना दिन भ्याइ नभ्याइ भएको छ ।
राजनीतिसँगै समाजसेवालाई पनि एकसाथ अगाडी लिएर हिँडेकी बराल विद्यार्थीकाल देखिनै राजनीतिमा सक्रिय छिन । नवनिर्वाचित राप्ती नगरपालिकाकी मेयर तथा चितवन जिल्लाकी पहिलो महिला मेयर बरालसँग उनले गर्ने विकासका भावी योजनाका विषयमा अनुज न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको केही अंश प्रस्तुत छ :
१. सर्वप्रथम राप्ती नगरपालिकाको मेयरमा बिजयी हुनुभएकोमा तपाईंलाई हार्दिक बधाई छ ।
-हजुरलाई हार्दिक धन्नेवाद छ ।
मलाई राप्तीको मेयर बनाएर राप्तीको बिकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हुने सम्पूर्ण राप्ती नगरवासीहरुलाई हार्दिक धन्नेवाद दिन चाहन्छु । चुनावी दौरानमा हातमा हात मिलाएर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरु प्रति म आभार प्रकट गर्दछु ।
२. जितको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
– जित नगरका सबै आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुको हो । सम्पूर्ण नगरवासीहरुको हो । मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुभएको,मेरो जितको कामना गर्नुभएको सबैको जित हो यो ।
३. जनताले तपाईंलाई नै रोज्नुको कारण ?
-भोट माग्न जनताको घर-घरमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ उहाँहरुसँग मैले जे प्रतिवद्धता दिएको छु त्यो पूरा गर्नेछु । मेरो प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न जनताले मलाई यो जितमार्फत् जिम्मेवारी दिनुभएको छ । जनताले जिम्मेवारी सुम्पे, म पूरा गर्छु ।
४. यहाँका सुकुमबासीहरुले तपाईंप्रति ठूलो भरोसा गरेका छन्, सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको लागि के गर्नुहुन्छ ?
-राप्ती नगरपालिकाका सुकुमबासी समुदायले भोगेको समस्या मलाई राम्ररी थाहा छ । सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र लालपूर्जा वितरण यहाँको प्रमुख चुनौती हो । सुकुमबासी समुदायको हितका लागि म जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छु ।
नेपाल सरकारले दिएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरणको काम सुरू गर्ने छु । तपाईंहरु ठुक्क हुनुहोस्, तपाईंहरुले मप्रति गरेको भरोसा तोड्दिन । तपाईंहरुकै हितमा काम गर्छु ।
५. राप्ती विकासका लागि तपाईंको योजनाहरु के–के छन् ?
-गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसैले, यो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मेरो भूमिका महत्वपूर्ण रहने छ, जसका लागि राप्तीका हरेक वडामा स्तरीय स्वास्थ्यचौकीको स्थापना गरिने छ ।
विद्यालयबाहिर रहेका र पिछडिएका बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने मेरो योजना हो ।
यस्तै, समाजमा मौलाएको भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, विद्युत्, खानेपानी, ढल र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्न, नगरभित्रका उद्योग व्यवसायीलाई उचित सहयोग र संरक्षण गरी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, आदिवासी, महिला, जनजाति मुस्लिमलगायत पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान र समानताको आधारमा न्याय दिलाउने, सरकारी काम चुस्तदुरूस्त रुपमा व्यवस्थित गरी जनमुखी प्रशासन लागू गर्ने, नगरमा रहेका सम्पूर्ण टोलविकास संस्थालाई संस्थागत रुपमा विकास गरी परिचालन गर्ने,आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, वधशालाको लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्थापन गर्ने, तरकारी बजारलाई समुचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्ने योजना बनाएको छु ।५ वर्षभित्र वृद्ध र असहाय भत्ता वृद्धि गरी पाँच हजार पु-याइने छ । यीबाहेक समस्याहरु धेरै नै छन् । ती सबै समस्याको उचित समाधान गर्नमा म र मेरो टिम हरदम तत्पर रहने छ ।